admin – celepublic
သရုပ်ဆောင်ဆုထက်ကုဋေကတော့ အနုပညာလောကထဲက ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဆုထက်ကုဋေကတော့ ကိုဗစ်လက္ခာဖြစ်တဲ့ နေမကောင်းဖြစ်ပြီး နောက်ရက် အနံ့မရတော့လို့ ငိုခဲ့ရပြီး ဆေး စစ်ချက်ယူခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလဲ အားမငယ်ဖို့ မစိုးရမ်ဖို့ အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဆုထက်ကုဋေက ဘာဖြစ်လာလာရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပါပဲလို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့
(ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် ဗဟိုစည်ဆေးရုံမှ သူနာပြုအကူ မခင်မျိုးသူ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်ဇော်လင်းနှင့် အင်တာဗျူး)ဗဟိုစည်ဆေးရုံတွင် သူနာပြုအကူအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် မခင်မျိုးသူ(အသက်၂၃နှစ်)သည် Covid19 ရောဂါဖြင့် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် နံနက်ပိုင်တွင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ မခင်မျိုးသူသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်တို့ မိသားစုကတော့ လက်ရှိမှာ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်ထဲကတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားရလို့ ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ နန္ဒာလှိုင် ညီမအရင်းရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ Covid -19 Positive ဖြစ်နေတယ်လို့သိပြီးပြီးချင်း နောက်ရက်မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သွက်လက်ထက်မြက်လွန်းတဲ့ အမူအယာတွေနဲ့ တစ်ချိန်က အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်ကတော့ လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ မလုပ်ဖြစ်တော့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးခြင်းကို အပြည့်အဝရရှိထားဆဲပါပဲ။ လတ်တလောမှာတော့ စမိုင်းလ်က ကိုဗစ်ကာလအတွင်း လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေအနှံ့အပြားကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းရင်း ဖြတ်သန်းနေလျက်ရှိတာပဲ
အခုမြင်အခုပျောက်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကြီးရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းပုံကို ပြောပြလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင်
ပရိသတ်ကြီရေး သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်က ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြီးရဲ့ကြောက်စရာကောင်းပုံကိုပြောပြလာပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်ဟာလတ်တလောမှာတော့ မိသားစုနဲ့အတူ home Quarantine (၁၄)ရက်ဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်ရဲ ညီမလေး နွေးနွေးတို့လင်မယားမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီ နွေးနွေးရဲ့ ခင်ပွန်းဟာကိုဗစ်ရောဂါမှန်းသိပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်တို့မိသားစုဟာ ပိုးရှိတဲ့သူနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိပေမယ့် Quarantine ဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံက ကိုဗစ်လူနာတွေကို လက်ခံကုသပေးနိုင်မည်မဟုတ်ဟု ဆို
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုဗစ်လူနာများကို ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများတွင် လက်ခံပေးရန် ညွှန်ကြားထားပေမယ့် ယခုလက်ရှိ ဆေးရုံအနေအထားအရ ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ လက်ခံကုသမှု မပြုနိုင်ခြင်းအား နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးရန် အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံက အကြောင်းကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှစတင်ကာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကိုဗစ်-၁၉လူနာများအား ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများမှာ ဆေးကုသခွင့်ပြုရန် မူအားဖြင့်သဘောတူကြောင်း
ကိုဗစ်ရောဂါကြီးကို တိုက်ထုတ်ဖို့ ကရင်ပြည်နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို ဆေးဝန်ထမ်းတွေ စစ်ကူလာပါပြီ
ကိုဗစ်ရောဂါကြီးကို တိုက်ထုတ်ဖို့ ကရင်ပြည်နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို ဆေးဝန်ထမ်းတွေ စစ်ကူလာပါပြီ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး covid19 ကုသရေးဌာနဖောင်ကြီးသို့ သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဘားအံဆေးရုံကြီးမှ သူနာပြုဆရာဆရာမများ။Fighting!!
၂၄ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်ကူးစက်မှု (၁၀၀၀) နီးပါး မြင့်တက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ
(၂၁-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုဗစ်လူနာသစ် (၂၆၄) ဦး အသစ်ထပ်တိုးခဲ့ပါတယ်။ (၂၀-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့ မနက်(၈:၀၀) နာရီနဲ့ ည (၈:၀၀) နာရီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ (၆၇၁)
ကိုဗစ်ရောဂါ အတွက် အဓိကလှူဒါန်းနေတဲ့ မြန်မာပြည်က ထိပ်တန်း သူဌေးကြီးများစာရင်း
၁. ဦးဇောျဇောျ MAXဆီဆိုငျ MAX Group. AYA ဘဏျ ၂. ဦးအောငျကိုဝငျး KBZ air line. KBZ ဘဏျ ၃.ဦးဇောျမိုးခိုငျဇနီးဒေါကျတာစောနနှေယျ AA ဆေးနှင့ျဆေးဝ ါးပစ်စညျ းထုတျ ကုမ်ပဏီ